Pogba 'n miidhaarra akkuma deebiheen galchii galmessise - Gaachana Sabaa
November 19, 2017 November 22, 2017 Gaachana SabaaIsportii, Manchester United
Paul Pogban galchii tokkoo fii carraa galchii tokko nama biraa gargaaruun deebii isaa gara taphaatti bifa gaariin deeggartoota United fundurratti kan of mul’ise yoo tahu Manchester United duubaa dhufuudhaan Newcastle 4-1 moo’uu danda’aniiru.
Taphichi akkuma gareen United moo’u eegamu illee jalqaba irratti Newcastle kubbaa hedduu funduratti qabatanii deemuun galchii tokko daqiiqaa 14 irratti Dwight Gayle’n kubbaan Victor Lindelof mucucaatee osoo hin ittisin isa bira dabarte galchuun United rifachiisuu danda’aniiru.
Pogban Martialiif kubbaa qaxxaamursuun akka galchii walqixxeessaa Mataan galchu godheera.Yeroo boqonnaa ba’uuf jedhan United galchii Smalling galcheen taphicha durseera.
Paul Pogban miidhama torban sagalii booda kan tapha kubbatti deebihe yoo ta’u,kubbaa Rushford irraa kennamteef galchuun galchii sadaffaa galmeessiseera.Lukaakun galchii afraffaa galchuun xumureera.
Kun ammoo United tapha 38 ffaa mana isaaniitti osoo hin mo’amin turuu isaanii kan itti mirkaneessani dha.
Ibrahimovic miidhama ji’a torbaan booda kaleessa daaqiiqa dhumaa irratti yeroo Martialin jijjiiramee galu deeggartootni Manchester United sagalee deeggarsaa fii jaalalaa dhageessisaniiru.
Zlatan Ibrahimovic yaalii galchii godhe.
Akkuma galeen yaalii galchii ajaa’ibaa godhuun osoo hin milkaayin hafullee tapha Kubbaatti deebihuu isaatiin gammachuu isaa hin dhoksine.
Deeggartoota isaa fii namoota sadarkaa kana gahuuf deeggarsa isaaf godhan hunda galatoonfateera.
Gareen Arsenal Oollaa isaanii Tottenham mo’uuf yaalii torbaffaatti milkaa’e
Keessummeessitoonni daqiiqaa 38 tti kubbaa dheeraa Ozil irraa dhufe Mustafiin mataan dhayee galchuun yeroo dursan booda ammoo daqiiqaa shan booda Alex Sanchez dhihoo irraa galchuun xumureera.Arsenal tapha 6 kanaan dura waliin taphataniin osoo hin moo’in hafan illee kaleessa yeroo torbaffaa isaaniitti magaalli guutuun kan isaaniiti.
Akka taphni Sambata kaleessa itti xumurame asiin gaditti hubadhu
Who delivered the #PL performance of the day? 🤔 pic.twitter.com/cE6ZUI6e5w
Gabatee sadarkaa Premier League
← Ibrahimovic fii Pogban tapha Newcastle waliin tahu irratti nii hirmaatu
Zimbabwe ruling party ZANU-PF party sacks President Mugabe →
Obama criticizes Trump’s end to Dreamers program ‘cruel’
September 6, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Obama criticizes Trump’s end to Dreamers program ‘cruel’
October 16, 2017 Gaachana Sabaa Comments Off on Death toll from Mogadishu twin truck bombing rises to more than 300 people-Somalia attack